Ahoana no fomba niforonan’ny Baiboly ?
"Fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy. " 2 Petera 1:21
"Izay soratra rehetra (dia) nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra." 2 Timoty 3:16
Mpanoratra samihafa, 45 eo ho eo, no nandray anjara tamin’ny fanoratana azy. Tontolom-piarahamonina sy kolontsaina isan-karazany no niaviany. Tao i Mosesy, manam-pahaizana ambony voaofana toy ny Farao; Josoa, mpitari-tafika mahay; Daniela, minisitra tamina fitondram-panjakana nifandimby; Nehemia, mpitondra kapoakan’ny mpanjaka; Davida, mpanjakan’ny Isiraely; Amosa, mpiandry ondry; Petera, mpanarato; Matio, mpamory hetra; Lioka, dokotera; Paoly, mpanamboatra lay.
Ireo boky mandrafitra ny Soratra Masina dia voasoratra tanaty toe-javatra mahagaga, indrindray: tany an’efitra i Mosesy no nanoratra, Jeremia sy Paoly tany am-pigadrana, Lioka tany am-pandehandehanana, Jaona tany an-tsesitany. Nandalo tamin’ny fihetseham-po rehetra ireo mpanoratra: fifaliana sy fitiavana, tahotra sy fanahiana, famoizam-po sy fisalasalana. Avy tamin’Andriamanitra no nanoratana, nandritra ny taonjato maro, ireo fizarana samihafa ao amin’ny Baiboly; ny fitambaran’ireo anefa dia mampiseho endrika iray tsy mizarazara, ary tsy hain’ny sain’olombelona hazavaina izany. Nahakasika lohahevitra an-jatony ireo mpanoratra, kanefa tsy misy mifanohitra ny nosoratany.
Ahoana no nampisy olona, niaina tamina vanim-potoana sy avy tamina tontolo tena samy hafa toy izany, kanefa nahay nanoratra zavatra mirindra mikasika lohahevitra marobe? Tsy mahagaga izany. Na inona na inona fitaovana nampiasaina, dia Andriamanitra iray ihany no nanome tsindrimandry ireo mpanorata, sy naneho ny tenany tao amin’ireo pejy rehetra ireo. Mba hianarana hahafantatra Azy, dia aoka hihaino Azy : aoka hamaky ny Teniny.